I-c series ye-multistage fan centrifugal fan, i-China C series ye-multistage centrifugal fan abavelisi, abaxhasi, i-factory -i-NANTONG RONGHENG YENDALO YOKUSINGQONGILEYO, i-LTD.
Ikhaya>iimveliso>Centrifugal fan>C uthotho lwe-multistage fan centrifugal
Iimveliso zamanqanaba ngamanqanaba e-blower centrifugal eveliswa yinkampani yethu inendawo kunyango lwelindle lwasekhaya, ukufafaza i-desulfurization yegesi, ukuthambisa, ukomisa i-vacuum, umgubo kunye nokuthuthwa kwe-granular, amalahle kunye nokuhlamba amalahle, uxinzelelo lwe-nitrogen, ukwanda kwe-biogas, ukujikeleza kobushushu kunye neminye imimandla .
Ngokuqhubeka kwezinto ezintsha zetekhnoloji, inkampani yethu isandula ukuphuhlisa ukusebenza ngokukuko kwinqanaba eliphezulu le-centrifugal (turbine) blower. Ukusebenza kwayo okuphezulu, ukonga umbane, ingxolo ephantsi kunye nezinye izibonelelo ziyenza ukuba ibe yimveliso ye-blower esebenza kakuhle kunye nexabiso eliphantsi e-China. Imveliso inyanzelisa ngokungqongqo i-GB / T28381- Umgangatho weSizwe ka-2012 "wamaxabiso asikelwe umda wokuSebenza kwaMandla kunye noVavanyo lokonga umbane lweCentrifugal Blower", kwaye waluphumelela uvavanyo lweNantong City Product Quality Supervision and Inspection Institute.
Inkampani yethu ngoku ineetekhnoloji enelungelo elilodwa lomenzi elinamalungelo obunini bokuzimela, kwaye iphumelele ngokulandelelana iimbasa ezinje nge "Ishishini lobuchwephesha obuphezulu", "Ishishini labucala lobuGcisa kwiPhondo laseJiangsu", kunye "neemveliso zobuchwephesha obuphezulu".
1. Ubunzima bokukhanya
Xa kuthelekiswa nohlobo olunye lweblower, ubunzima buyi-30% elula.
2. Ingxolo ephantsi
Ingxolo yomzimba ovuthuzayo ingaphantsi okanye ilingana ne-84dB (A), kwaye yingxolo ephezulu kakhulu. Xa kungekho gumbi lingenasandi, umgama wokusasaza awugqithi kwiimitha ezingama-20
3. Intshukumo encinci
Ngaphantsi kweemeko zokusebenza ngaphandle kwaso nasiphi na isixhobo sokunciphisa ukungcangcazela, isantya sokungcangcazela somsinga (i-bidirectional) yesitulo esiphethe i-blower yi-.4.0mm / s.
4. Akukho kungqubana koomatshini
Xa i-blower isebenza, akukho kungqubana koomatshini phakathi kwezinye iindawo ngaphandle kokuthwala, okunciphisa ingxolo kunye nokuqinisekisa ubomi benkonzo.
5. Oomatshini abangenayo i-oyile
Akukho oyile okanye irhasi iveliswayo ngexesha lokusebenza kwalowo uvuthuzayo, kwaye i-aerator ayonakalisi, nto leyo eyolula ubomi benkonzo yenkqubo yomoya.
6. Shaft lobushushu digital ukubonisa isandi kunye alarm ukukhanya
Indawo yokuhlala yangasemva nangasemva yomzimba we fan ixhotyiswe nge-thermocouples, kwaye amazibuko aqhagamshelwe kumboniso wedijithali ukubonisa ubushushu beshafti. Iqondo lobushushu lokuthwala liya kunyuka ngenxa yokunqongophala kokugcwala kweoyile, okanye ioyile. Xa ubushushu obumiselweyo bugqithisiwe, isandi kunye nesikhanyisi esikhanyayo siya kuzenzekelayo ngokuzenzekelayo.
7. Ukulungiswa okulula
Kuba i-centrifugal blower ingumatshini ongenachaphaza, i-Rotor ixhaswe ngaphambili nangasemva iibheringi, kwaye i-casing kunye ne-impeller azonakaliseki ngokulula. Ulondolozo lwemihla ngemihla ikakhulu kukuqinisekisa ukuthambisa okusebenzayo kweebheringi kunye nokujonga ubushushu. Ngokwesiqhelo, kuphela ukubuyiselwa kweebheringi kunye nokudibanisa kuyadingeka. Umfundi. Isithsaba se-blower samkela uthotho loqhakamshelwano lwesakhiwo (esifana nomtya weehagu eziswiti), ngaphambili nangasemva izihlalo zokuthwala zizimeleyo, nangaphandle (okunxulunyaniswe neebholithi) kunxibelelene nokutya kunye nokukhupha umbane. Xa kulungiswa, akukho sidingo sokuqhaqha wonke umatshini, vele ukhulule i-bolt eqhagamshela kwaye ususe isihlalo sokuthabathela indawo ukubamba, ukugcina ixesha kunye nokulula.
8. Ityala lokupholisa amanzi
Kuba i-blower enoxinzelelo oluphezulu kune-8mH2O, kuba iqondo lobushushu kwindawo yokuphuma kufuneka idlule kwi-160 ℃, ispacer sokupholisa kongezwa kumaleko angaphandle wesitampu (i-stator), enokunciphisa iqondo lobushushu begesi ngaphezulu kwe-40 ℃, ukwandisa ngokufanelekileyo ukunyuka koxinzelelo lwe-blower Ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza ngokupheleleyo komsebenzi. Umthombo wamanzi unokudityaniswa kuthotho kunye nesixhobo sokupholisa amanzi kwindawo yokuhlala. Ukusetyenziswa kwamanzi kungaphantsi kwe-1.5m3 / h, kwaye indleko zokusetyenziswa kwamanzi ziphantsi kakhulu kuneendleko zombane ezigcinwe ngenxa yokuphuculwa kokusebenza kakuhle
9. Ulawulo lwe-inverter
Ukwenza iblower exhotyiswe nge-380V yeemoto ezinamandla asezantsi, isiguquli sokuhamba rhoqo sinokusetyenziselwa ukunyusa isantya samandla kunye nokunyusa isantya ukuya kuma-3600rpm, ngokwenjenje sonyusa ukusebenza kwe-blower ukuya kuma-80%. Emva kokuguqulwa kwamaxesha, ukusetyenziswa kwamandla kunokugcinwa kakhulu. Ngokukodwa, i-booster kunye ne-flow rate adjustment range ye-blower inokuba nkulu, kwaye uluhlu lwesicelo senqanaba lamanzi angaguqukiyo njenge-SBR ibanzi. Inenzuzo yokugungxula ngenxa yokuvalwa kancinci kwe-aerator, ngakumbi i-blower engezantsi kwe-45m³ / min inokufikelela malunga ne-11mH2O Ukunyusa ngokufanelekileyo kusombulula iingxaki zokuhamba kancinci kunye neenkqubo zoxinzelelo oluphezulu ezinje nge-aeration enzulu.
10. Kulula ukuyifaka
Ukuvuthuza ngokupheleleyo kuhanjiswa kumzi-mveliso. Iinjini eziphambili kunye neemoto zilungelelaniswe kwisiseko esinye sentsimbi. Akukho sidingo sokongeza ezinye izixhobo zedamping kufakelo, kwaye iimfuno zenqanaba lofakelo aziphezulu. Icebo lokucoca ulwelo endaweni yokungenisa i-blower inokufakwa ngokuthe ngqo kwi-blower; kwaye umbhobho wokuphuma kufuneka uqhagamshelwe kwi-blower ngokudityaniswa ngokudibeneyo ukunqanda ubunzima bombhobho kunye namandla ongezelelweyo kufakelo ekusebenzeni ngokuthe ngqo kulowo uvuthuzayo.
11. I-rotor yenziwe ngeteknoloji ephezulu
I-impeller isebenzisa i-elementi enesiphelo kwaye yamkela i-quasi-three-dimensional (flow ternary) yoyilo. Isiphumo senziwe kumgangatho ophezulu wealuminium ngokuphosa i-centrifugal; ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo, ukuqinisekisa ukomelela kwesithuthi phantsi kokusebenza kwesantya esiphezulu, ukuze kuqinisekiswe ngenkonzo ende ye-impeller. Ngenxa yokuba i-impeller line inengqiqo kwaye yenziwe kakuhle, ukusebenza kakuhle kwe-blower kufikelela kuma-78%, okugcina amandla amaninzi kunye nokunciphisa iindleko zokusebenza.
12. Ukupholisa amanzi ezindlini
Kwinkqubo yokubetha, ngenxa yokucinezelwa komoya, iqondo lobushushu lekasi yokugqibela ngokubanzi liphezulu kune-80 ℃, kwaye iqondo lobushushu leXia Li linokuphakama ngaphezu kwe-100 ℃, ke isihlalo sokupholisa isihlalo kufuneka siqwalaselwe. Kuyilo lwantlandlolo, isixokelelwano sokupholisa umoya esihlala ngasemva sifakelwe, kwaye ngoku siyilahla kwesi sizathu, songeza inkqubo yokupholisa amanzi, siqonda umsebenzi weinshurensi emibini yesihlalo sokuthwala sangasemva kunye nokwandisa ubomi benkonzo ethwele. Umgangatho wamanzi okupholisa awaphakamanga, amanzi apompo, amanzi afunwayo, okanye nelindle lokuqala elinyangiweyo lingasetyenziswa.
Ukubalula okuphambili kobugcisa beemveliso zoluhlu lweC
Ukuhamba kwezinga lokungena: 15-1500m³ / min
Uxinzelelo iplagi: 1000-12000mmH2O
Ubushushu bendalo: -35 ~ + 40 ℃
Ukufuma Relative: 20 ~ 85%
Ingxolo: -84dB (A)
Ukunikela ixabiso lokungcangcazela kwesihlalo: isantya sokungcangcazela ≤4.0mm / s